Kooxda hanatay Premier League ee Leicester City oo soo bandhigtay maaliyadeeda cusub ee xilli ciyaareedka soo socda + Sawirro – Gool FM
Kooxda hanatay Premier League ee Leicester City oo soo bandhigtay maaliyadeeda cusub ee xilli ciyaareedka soo socda + Sawirro
Haaruun May 6, 2016
(Leicester) 06 Maajo 2016 – Leicester City waxa ay kor u qaadi doonaan koobka horyaalka Premier League markii ugu horreysay Sabtida, waxaana ay haatan shaaciyeen sida ay u eg tahay maaliyadda ay ku difaacan doonaan koobkan xilli ciyaareedka dambe.
Tababare Claudio Ranieri kooxdiisa ayaa si layaab leh ku xaqiijisay hanashada horyaalka Premier League habeenkii Isniinta ee la soo dhaafay, kaddib markii ay kooxda Tottenham oo soo cayrsanaysay ay barbaro la gashay Chelsea.
Waxa ay kooxda Leicester City dukaamadeeda ka soo buuxisay maaliyaddeeda cusub oo lagu iibsan doono 50 ginni, kaddib markii ay dukaamada kooxda ay faarujeen taageerayaasha faraxsan ee Foxes oo wax waliba oo yiilay iibsaday dabaal deggooda awgood.
Midabka maaliyaddan cusub waa Buluug, waxaana maaliyaddan oo ay samaysay shirkadda PUMA lagu xardhay midabka dahabiga ah, iyadoo la filayo inay noqon doonto maaliyaddii ugu caansanayd taariikhda kooxdan Leicester City.
Kooxda dawacooyinka lagu naaneyso ayaan maaliyaddan cusub ku ciyaari doonin berri oo Sabti ah, waxaana ay xiran doonaan markoodii ugu dambaysay maaliyadooda haatan marka ay garoonkooda King Power Stadium ku martigelinayaan kooxda Everton.
MARKAN JAMAAHIIRTAA LA JIRA: Maxaa wacay in Sturridge uu kulanka kaddib qol cidla waaql'a ah ku dabaal dago!?
Imise ayay Man United siineysaa Louis van Gaal haddii ay kooxda ka ceyrsiyo?